कसरी सान्त्वनाकर्ताले मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुभयो - Love of God - Nepal
पुस्तक पुस्तकालय » Christian Walk »
लेखक Niklas Smars
प्रकाशित जुलाई 27, 2021
लेखिएको जुलाई 26, 2021
क्रुसलाई भेट्टाउनु र क्रुसलाई जाँचेर हेर्नु
हामी के गर्छौं जब हामी बोल्ने आँट गर्दैनौं, तर त्यहाँ आगो छ कि साझा गर्न आवश्यक छ? जब परमेश्वरले हामीलाई उहाँको प्रेमले चुनौती दिनुहुन्छ र ती नयाँ धारणाहरू छन् जुन हाम्रो पूर्व धारणामा रहेको विश्वासको बिरूद्ध छन्, हामी कसरी जान्दछौं कि तिनीहरू सत्य छन् कि छैन? र यदि यो सत्य हो भने, हामी कसरी तिनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा समावेश गर्ने? २१ वर्षको उमेरमा, निक्लास स्विडेन छोडेर विश्व यात्रा गर्न गए। उनलाई बाटोमा धेरै चीजहरूले चुनौती दिएका थिए तर उनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा के हो भने बाइबलका सुन्दर बाइबल सत्य र आफूले उहाँलाई कत्ति माया गर्थे भनेर पत्ता लगाएका विचार र अनुभवहरू थिए। त्यसोभए ऊ अब चुप लाग्न सकेन र कसरी लेख्न सिक्नुपर्‍यो, येशूसँग घनिष्ठ भएको गवाही साझा गर्न।
तपाईको विश्वासको पक्षमा खडा हुनु सजिलो छैन जबकि अरुको विश्वासहरुको पनि सम्मान गर्नुहुन्छ। यो एक मार्ग हो जुन नक्शा गरिएको छैन, र त्यहाँ केही शिक्षकहरू छन्। यद्यपि यी ईश्वरीय सत्यहरू हुन्! परमेश्वर आफैले निक्लसको जीवनमा सत्यको ज्योतिलाई डोर्याउनुहुने थियो। तर कसरी?
यो पुस्तक मुठभेडहरू, संवादहरू, र प्रतिबिम्बहरूको संग्रह हो जुन यात्राको रूपरेखा बनाउँदछ जुन हामी मध्ये धेरैले सम्बन्धित गर्न सक्दछौं। यसले हामीलाई हौसला प्रदान गर्दछ र हाम्रा सान्त्वनाकर्ता, ख्रीष्टसँग हिंड्ने सम्बन्धमा सोच्न मद्दत गर्दछ।
प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ। किनकि डरको सम्‍बन्‍ध त
दण्‍डसँग हुन्‍छ, अनि जो डराउँछ
प्रेममा त्‍यो सिद्ध भएको हुँदैन।
१ यूहन्ना ४:१८